သောသီခို: KNU ကရင်အမျိူးသားအစည်းအရုံး ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက် (03/01/2013)
KNU ကရင်အမျိူးသားအစည်းအရုံး ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက် (03/01/2013)
KNU Statement Burmese Version (3!1!2013)
May be Thein Sein will give you lots of $$$$$$$ to shut your mouth about Kachin war and give you many opportunity to do business and then you will forget everything,even your people and your soldiers.
Now I understand why we are like we are. Our Karens are over-smart.They want to catchastar in the sky while not thinking of how to get there first.If I don't have food, how can I share with my neighbors?
ဘော်၊ခေါင်းဆောင်တို့ ရေ ခင်ဗျားတို့ လက်ပိုင်ပြီးတစ်ကယ်ဘဲကြည့်နေတော့မှာလား????ဖူးမူတူးကနိုင်ငံရေးအတွေးအခေါ်မရှိ၊ ကွယ်ထူးဝင်း စီးပွားရေးဘီလူး....အစိုးရရဲ့မက်လုံးတွေထဲမှာ သူ့ ရဲ့ အဆီပြန်နေတဲ့မျက်နှာကြီးဟာပိုက်ဆံကလွဲပြီးဘာမှမြင်တော့တာမဟုတ်ဘူး.နှစ်ကျွန်းပြန်မန်းငြိမ်းမောင်ကတော့ အစိုးရရဲ့လှည့်ကွက်ထဲမှာ ဦးနောက်ပြက်သွားပြီးသည်းချေမရှိတော့ဘူး...ဒီ ခေါင်းလေး သုံးလေးလုံးလောက်ကတော့ သိန်းစိန်က အရေဖျော်ပြီး ခြေ
ဆေးပစ်လိုက်လို့ ရတယ်....ဒီလူတွေ ရန်ကုန်ကိုလည်ဆင်းခံတာမဟုတ်ဘူး
ပါ....ကိုယ်စားလှည်တွေကို အားမနာတမ်းဝေဖန်ရရင်ကျုပ်လုံးဝ သဘောမကြဘူး...တစ်ခြား ပညာတတ် အတွေးအခေါ်ရှိတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေကို သူ တို့ ဘာလို့ ဘေးဖယ်ထားရတာလဲ....
take the photos Thein Sein meets KNU leaders http://democracyforburma.files.wordpress.com/2013/01/524811_588468311168968_907758939_n.jpg
don,t be unfair,as KNLA had fighting with Goverment troops did anyone hear kachin shouting for KNU? they said already stop the war, but it,s Kachin political Case to get toghether or whatever.happy new year to all of you